Good Method for Myanmar Zawgyi Font – MIUI 9.5+ – Xiaomi Guide
Published July 5, 2018 by Thet Zaw Ko
MIUI 9.5 မှာ Xiaomi အနေနဲ့ Theme Policy တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အဲသည်အခါမှာ အများသိတဲ့အတိုင်း မိမိတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Themes, Fonts mtz file တွေကို အရင်လို Import လုပ်.. Apply လုပ်သုံးဆိုတာမျိုးမရတော့ပါဘူး။ Themes အနေနဲ့က Theme Store ထဲမှာရှိတဲ့ Free Themes တွေကို ရှာဒေါင်းသုံးလို့ အဆင်ပြေပေမယ့် Myanmar font အတွက် ထည့်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ Theme Store ထဲမှာ Myanmar fonts တွေကိုပါ ဖြုတ်ချထားတော့ Mi Acc ဝင်ထားပြီး ရှာဒေါင်းသွင်းတာမျိုးလဲ လုပ်မရတော့ပါ။
သည်တော့ မြန်မာစာကို ထည့်ဖို့အတွက် TTA, MIUI Custom Font Installer app တွေလို Third Party app တွေနဲ့ထည့်ဖို့ကြိုးစားကြရပါတယ်။ သာမာန်လို mtz ကို Import/Apply ပုံစံလုပ်မရပေမယ့် ထည့်လို့တော့ ရသွားပါတယ်။ ရွေးသုံးလို့ရသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုထည့်ထားတာရဲ့ effect က ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ထည့်ခွင့်မပေးတာကို ရအောင်ထည့်ထားတဲ့အတွက် မိမိတို့ထားထားတဲ့ Themes, Wall Paper, Fonts စတာတွေဟာ အချိန်တစ်ခုကြာရင် အကုန်အလိုလို Default ပြန်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ Reboot ချရင် Default လိုတွေ ပြန်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ Xiaomi Groups တွေမှာမေးနေသလို Reboot ချလိုက်တာ Myanmar fonts တွေက အကုန်ပြောင်းကုန်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့…..။
Xiaomi Phone ကိုသုံးတာကြာခဲ့ပြီ။ Mi Account ဆိုတာလဲလုပ်ထားပြီး အမြဲဖုန်းမှာဝင်သုံးခဲ့တယ်။ ဟိုးအရင် Themes Store ထဲမှာ Myanmar fonts များစွာကို Free တင်ပေးထားတုန်းက ရှာဖွေဒေါင်းသုံးခဲ့တဲ့ Mi Account ရှိသူများကတော့ အခုအချိန်မှာ Themes App -> My Account -> Purchased ထဲမှာ Font တွေ ပြန်ရှာဒေါင်းထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ Themes, Font တွေ အလိုလိုပြောင်းသွားလို့ဆိုတဲ့ Error မျိုးတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ပါ။ အဲလိုလုပ်ခဲ့ဖူးသူမဟုတ်ရင်တော့ အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်ထားရင် Font ထည့်ထားပုံက Xiaomi Theme Policy နဲ့မကိုက်လို့ ပြန်ပြန်ပြောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါ။
လောလောဆယ်အချိန်မှာ Theme Store မှာ Search လုပ်လို့မရပေမယ့် ဒေါင်းသုံးလို့ရတဲ့ Myanmar Font လေးနှစ်ခုရှီပါတယ်။ အဲသည်ဟာကို ဒေါင်းထားပြီးသုံးလိုက်မှာပါ။ Theme Store ထဲကဒေါင်းသုံးတာဖြစ်လို့ Policy နဲ့လဲညီတဲ့အတွက် ဘာ Error မှ ကြုံမှာမဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်မှာ Mi Account ရှိတယ်။ ဖုန်းမှာဝင်ထားတယ် ဆိုသူတွေက အဆင့် – ၂ ကနေ Font ဒေါင်းထည့်တာလုပ်ကြည့်ပါ။ မရရင်တော့ တစ်က စရမှာပေါ့ 🙂
အဆင့် – ၁
Mi Account အသစ်တစ်ခုလိုပါမယ်။ ကျနော်စမ်းတာမှာ အရင် သုံးလေးနှစ်လောက်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ Mi Account တွေနဲ့ဒေါင်းကြည့်တာမှာ မရပါဘူး။ ဘာမှမရှိဘူးပဲပြပါတယ်။ Mi Account အသစ်တစ်ခု ချက်ချင်းလုပ်ပြီး Font ဒေါင်းဖို့လုပ်ရာမှာတော့ ပေါ်လာပါတယ်။ သည်တော့ Mi Account အသစ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဖုန်းမှာဝင်ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကအစ မသိဘူးဆိုရင်တော့ သည်ဟာ [ -> Using Mi Account <- ] ဖတ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းထဲရှိနေတဲ့ Mi Account နဲ့ဒေါင်းတာအဆင်မပြေသူတွေကတော့ Mi Account Sign Out ထွက်ပြီး Mi Account အသစ်တစ်ခုလုပ်ဝင်ပေါ့။ အဟောင်းပြန်ထွက်ချိန်ဖုန်းထဲမှာ Sync ထားတာတွေမပျက်အောင် အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းရွေးပြီး Account ထွက်တာလုပ်ပေါ့။ ပြီးမှ Mi Account အသစ်လုပ်..ဖုန်းမှာပြန်ဝင်ပေါ့..။
အဆင့် – ၂
အောက်ပါ Font နှစ်ခုကိုဒေါင်းပါ။ နှစ်ခုစလုံးကို Apply လုပ်တာ စမ်းကြည့်ပါ။ Reboot ခိုင်းရင် Reboot လုပ်ပေးပါ။ အဆင်ပြေပါပြီ။ Link ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Themes app အလိုလိုပွင့်လာပြီး Download button ပေါ်လာမှာပါ။ Mi Account တစ်ခု အသစ်လုပ်ပြီး MIUI 10 မှာအထိစမ်းထားပါတယ်။ ဒေါင်းလို့ရနေတုန်းပါ။ သည်တော့ရတုန်းလေးဒေါင်းပြီး ကိုယ့် Mi Account ထဲက Purchased ထဲမှာရောက်နေအောင်လုပ်ထားပါ။ နောင် သည်နှစ်ခု ရှိ မရှိ အာမခံလို့မရပါ 😀 😀
Mon Beauty Font
Mi Account အသစ် အခုမှစလုပ်သုံးသူများကတော့ သည်တိုင်းသာဆက်သုံးသွားလိုက်ပါ။ အရင်သုံးနေကြ အဟောင်းရှိသူတွေကတော့ သည်တိုင်းလေး တစ်နာရီလောက်အင်တာနက်ဖွင့်ရင်း သုံးစရာရှိတာသုံးနေလိုက်ပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာ Themes app -> My Account -> Purchased -> Fonts ထဲမှာ မိမိတို့ဒေါင်းထားတာလေး နှစ်ခုပေါ်နေပါပြီ။
နောင် မိမိဖုန်းမှာ ပြန်ထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MIUI 9.5 အထက်ကျော်တင်ထားမိတဲ့ သူငယ်ချင်းဖုန်းမှာပြန်ထည့်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို Purchased ထဲမှာ Fonts ရှိနေတဲ့ Mi Account လေးကို ဝင်..။ Font ဒေါင်း။ Apply/Reboot တွေလုပ်လို့စမ်း.. စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
MIUI Fans များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ.. 🙂
Aung Thu Win
ဆရာရေIOS Style Fontထူထူမဲမဲ ရိုးရိုးလေး zawgyi.ttfလေးပေးပါ့လားဗျ
ကောင်းတယ် bro mi ဖုန်းတွေရဲနည်းလမ်းတွေပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ…….
Htoo Chon Aung
IOS emoji ကို Mi မှာပေါျအောငျလုပျလို့ရလား
emoji font တွေကို twrp ကနေ flash ထည့်ပေးလို့ရတာလုပ်ပေးထားပါတယ်.. အဲသည်ထဲမှာ ပါပါတယ်